प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्रीको दाहाललाई जवाफ - 'प्रम कार्यालयको जग्गा बिक्रीमा सत्ताधारी पार्टीकै महासचिव मुछिएका छन्, यहाँ मात्रै हो भ्रष्टाचार मौलाएको ?'- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
धनुषा — तत्कालीन माओवादीका नेता रामवृक्ष यादवको सम्झनामा सोमबार धनुषामा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढेको, जनताले झन् दुःख पाएको भन्ने अभिव्यक्तिको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सार्वजनिक कार्यक्रमै जवाफ फर्काएका छन् ।
मंगलबार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिती धनुषाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहाललाई मन्त्री यादवले सिंगो मुलुक नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाए । 'प्रदेश दुईमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने अभिव्यक्ति गलत छ,' मन्त्री यादवले भने, ‘नेपालभरी नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । ३३ क्विन्टल सुनकाण्ड नेपालमै भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जग्गा बिक्रीमा नै सत्ताधारी पार्टीकै महासचिव मुछिएका छन् ।’
मन्त्री यादवलेको अभिव्यक्ति लगत्तै दाहालले समग्रमा मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती भएको बेला प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । आन्दोलन र संघर्ष गर्दा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त सरकारको माग गरेको थियो,' दाहालले प्रश्न गरे, ‘संघर्ष गर्दा यस्तै शासन खोजेको थियो त ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बनाउन पहल आवश्यक छ ।'
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:५४
वीपी प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट बन्द, उपचार प्रभावित
भाद्र ३, २०७६ प्रदीप मेन्याङ्बो
(सुनसरी) — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन आपूर्ति घटेपछि सेवा प्रभावित भएको छ । ६ महिनाअघि मात्रै जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको प्रतिष्ठानको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको छ । निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट भइरहेको आपूर्ति मागका तुलनामा कम हुँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको हो ।
निजी प्लान्टमा खराबी आएर उत्पादन हुन नसकेपछि प्रतिष्ठानले खनारको दुर्गा अक्सिजन प्लान्टले सिलिन्डरमा खरिद गरिरहेको छ । अर्कैको प्लान्टबाट अक्सिजन खरिद गर्नुपर्दा प्रतिष्ठानलाई दैनिक ६० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म व्ययभार पर्ने गरेको छ । दुर्गा प्लान्टले पनि पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसकेपछि वार्डहरूमा विरामी भर्ना लिने दर कम गरिएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ ।
बिग्रिएको प्लान्ट मर्मत गर्न दुई सातादेखि प्रयास गरिरहेको प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राडा. गुरु खनालले बताए । ‘हामीलाई सप्लाइ दिनेले मागको परिमाणअनुसार पठाउन नसक्दा सेवा प्रभावित रहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘छिटै आफ्नै प्लान्ट चल्ने बनाउने कोशिस जारी छ । त्यो सञ्चभालनमा आए समस्या हटछ ।’
प्रतिष्ठानमा युनिषी इन्डियाले उपलब्ध गराएको २ सय ८० लिटर प्रतिमिनेट उत्पादन गर्ने सानो स्केलको पुरानो प्लान्ट बिग्रेको थियो । उक्त प्लान्ट बिग्रेको करिब १८ महिनापछि गत माघ २४ मा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानीमा अर्को प्लान्ट जडान गरिएको थियो । उक्त प्लान्टका लागि पूर्वउपकुलपति प्राडा. बलभद्रप्रसाद दासको पालामा ०७३ जेठ २९ मा कार्यकरिणी समितिले गरेको निर्णयअनुसार टेन्डर खोल्ने निर्णय भएको थियो ।
टेन्डर पारेको काठमाडौंको डाइग्नोकेन प्रालिले १ सय २० दिनभित्र जडान गरिसकेर परीक्षण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । ०७५ भदौ अन्तिम सातामा मात्र युनिषी इन्डियासँग मिलेर ल्याएको उपकरण चौरमा त्यसै राखेर करिब ६ महिनासम्म डाइग्नोकेनका प्रतिनिधि विज्ञान अर्याल सम्पर्कविहीन भए ।
प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रियामा जाने चेतावनीपत्र लेखेपछि युनिषीले पठाएको प्राविधिकले प्लान्ट जडान गरे । तर, चालु भएको दोस्रो दिनमै दुईमध्ये एउटा जेनेरेटर बिग्रियो । यसबाट प्रतिष्ठानकै पदाधिकरीको मिलेमतोमा कबाडी प्लान्टमा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ डुबेको शंका गर्न थालिएको थियो ।
१६ सय लिटर प्रतिमिनेट उत्पादन क्षमताको नयाँ प्लान्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शुद्ध अक्सिजन उत्पादन हुने भनिएको थियो । एक महिनाअघि प्लान्टबाट उत्पादन नै बन्द भएपछि प्रतिष्ठानले निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट खरिद थालेको हो । युनिषी र डाइग्नोकेनले जडान गरेको प्लान्टले सम्झौताअनुसारको उत्पादन नगरेको र एउटा जेनेरेटरले काम नगरेको भन्दै प्रतिष्ठानले अक्सिजन जेनेरेटर निर्माता कम्पनी स्लोभाकियाको अक्सिवाइज, एयर कम्प्रेसर निर्माता कम्पनी जर्मनीको केजर, अक्सिजन बुस्टर निर्माता अमेरिकाको आरआइएक्स र मेनिफोल्ड बनाउने इटालीको एफडी कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।
ती कम्पनीहरूले अक्सिजन प्लान्टको सबै दायित्व युनिषी इन्डियाको भएकाले उतै सम्पर्क गर्नू भन्ने जवाफ पठाएका छन् । जडानको पाँच वर्षसम्म वारेन्टी भएपनि डाइग्नोकेन र युनिषीले मर्मत सम्भार गरिदिनुपर्ने सम्झौताविपरीत बेवास्ता गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:५०